DHAGEYSO:- Farmaajo oo Sadax Arin oo muhiim ah u tilmaamay Xasan Sheekh iyo Musharaxiinta oo dhan oo u heshiiyay | Barbaariyaha bulshada
DHAGEYSO:- Farmaajo oo Sadax Arin oo muhiim ah u tilmaamay Xasan Sheekh iyo Musharaxiinta oo dhan oo u heshiiyay
Musharaxa Madaxweyne ee Dalka Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in Madaxda Dalka loogu baahan yahay iney si sax ah ugu adeegaan shacabka ay u dhaarteen.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in Madaxda Soomaalida ay ahmiyad siiyaan Saddex Sheey ama Saddex Waxyaabood oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed.
Shabakada Barbaariye.com ayaa ogaatay in Musharaxiinta ay u midoobeen sidii uusan dib ugu soo laaban lahayn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Musharaxiinta inta ku sugan Muqdisho ayaa samaystay isbahaysi gaar ah kaas oo ay ku midoobeen, waxaana sidoo kale la aaminsanyahay in musharaxiin badan oo wali aanan dalka imaan inay ku jiraan isbahaysigaas.
Arintaan ayaa la aaminsanyahay inay culees badan ku noqon karto Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan waqtiga uu ka dhamaaday.